Manifold GIS wuxuu ku guuleystay abaalmarinta hogaaminta Gobollada GeoTec - Geofumadas
Manifold GIS wuxuu ku guuleystay abaalmarinta hogaaminta Gobollada GeoTec
Juunyo, 2008 ArcGIS-ESRI, AutoCAD-AutoDesk, tabo cusub, GIS kala cayncayn ah
Dhacdadan GeoTec Waxaa sanadkiiba laga qaadaa 1987 si loo hormariyo waayo-aragnimada ugu wanaagsan ee soo-saarka cusub iyo hirgelinta tiknoolajiyada casriga ah. Sida aan ku tusay Ajandaha Juun, Ayaa lagu qabtay Ottawa ka 2 in 5 maanta uun soo gabagabeeyay ayaa ku dhawaaqday ku guuleysatay abaalmarinta ee dadaalka ugu wanaagsan.
The makaanikada ee abaalmarintan ay la mid tahay waxa lagu qabtay sannadihii la soo dhaafay, waxaa la aqbalay ilaa April, ka dibna waxaa jira meel in la opine, cod iyo dhaleeceeyo soo jeedinta ka mid ah macaamiisha ee magazine GeoWorld ah, warside GeoReport iyo users caawinaada GeoPlace.com.
Kuwani waa kuwa ku guuleysta:
Abaalmarinta Goob Joogista - in la keeno horumariyayaal kuwaas oo abuuray barnaamijyo ama qalab casri ah oo awooddoodu ay ballaariso kartida wax soo saarka beeraha.
Guuleyste: Nidaamka Manifold
Uu mudnaanta ugu weyn tahay qiiq meterese ah si ay u horumariyaan codsiyada ay si habab cusub oo gelinno 64 processing kordhiyo karaa waxqabadka geeddi socodka barbar, taas oo ah mid ka mid ah mabaadiida aasaasiga ah ee waxa hadda waxaan ognahay sida "multicore". Waa mid xiiso leh in Manifold uu aqoonsado haddii qalabka uu leeyahay kaararka casriga casriga ah NVIDIA-CUDA iyo guud ahaan dusha buriyay xadka badan, ka map a la a dhibcood cufnaanta sare eegid DTM noqon kartaa in ka badan daqiiqo seconds 6 11 !!!
Waxaa sidoo kale jiray saddex qodob oo sharaf leh oo ku saabsan:
AutoDesk, iyada oo tiknoolijiyada helitaanka Macluumaadka FDO
ESRI Canada, oo leh qorshaha safka
LizardTech, oo leh Express Express
Abaalmarinta Shirkadda Guud - Waxaa loo geeyaa hay'ad ama hay'ad ujeedooyin aan faa'iido doon ahayn
Guuleyste: Hay'adda Milatariga Mareykanka ee Milatariga iyo gaadiidka ... (SDDCTEA) iyadoo la qaadanayo IRRIS nidaamkeeda go'aan qaadashada adag.
Sidoo kale qaybtan waxaa jiray saddex qodob oo sharaf leh:
Magaalada Nanaimo, ee British Columbia
Qaybta Degaanka iyo Xaaladaha Degdega, Kanada
Magaalada Quinte West, Ontario.
Abaalmarinta Ganacsiga gaarka loo leeyahay - Waxaa la siiyaa hay'ado gaar ah kuwaas oo ka gudubtay barbaarinta iyo cusbooneysiinta teknooloojiyadda GIS.
Guuleystey: ESRI, leh ArcGIS Explorer
Dhowr maalmood ka hor waxaan xasuustaa samaynta dib u eegis qalabkan, oo maalin kasta la mid ah Google Earth.
Labada sharafeed ee ku sharraxan qaybtaani waxay ahaayeen:
EmerGeo, iyada oo la adeegsanayo barnaamijka EmerGeoGIS
Intermap Technologies, iyada oo barnaamijkeeda NEXTmap 3D
Waxaan ku faraxsannahay in aan ogaanno in Manifold uu ku guuleystey noocyadan soo noqnoqonaya jawiga geospatial, sida aan ku aragno CalGIS... sano ah hadalka ku saabsan faa'iidooyinka codsigan badan ayaa aaminsan in dunida noqon kartaa dulmi haddii ay diido in laftiisa dhig mid ah qabashada waaweyn sida technology madax banaan oo aan la iibsaday by kale ahee-warshadaha, sababtoo ah ka dib.
AutoDesk ESRI Google Earth GIS kala cayncayn ah
Post Previous«Previous Fursad ah in laga shaqeeyo Madrid
Post Next U sheeg khibradaaga AutoCAD oo waxaad heshaa kamarad fiidiyoow ahNext »